ဘဝဆက်​ဟူသည်​ — Steemit
sawmyat (46) in myanmar •4months ago
မှ..အက်​ဆိုင်းမန့်​တင်​ရင်းဆရာ့ဆီကိုသွားဖို့ပြင်​သည်​။ Y.B.S ၂၄စီး၍သွားသည်​။ ​နေ့လည်​ဘက်​ဖြစ်​သည်​မို့ ကား​ချောင်​သည်​။ ထိုင်​ခုံရသည်​မို့ ထုံးစံအတိုင်း အရဟံဂုဏ်​​တော်​ကိုမျက်​စိမှိတ်​ရင်းပွားသည်​။ မိုးရာသီမို့ ​ကောင်းကင်​က​မှောင်​မဲ​နေသည်။
ထိုသို့ပွားရင်း...မျက်​စိကို​နေထိုးသလိုအလွန်​ကြည်​လင်းလာသည်​။ ကားကလည်းလှုပ်​တုတ်​တုတ်​၊ ​နေပွင့်​ပီထင်​၍..မျက်​စ်ိဖွင့်​လိုက်​​သောအခါ..မိုးအုံ့​သောအခါမြင်​သည့်​အတိုင်းသာဖြစ်​သည်​။ထို​ကြောင့်​ အရဟံဂုဏ်​​တော်​ကိုပွားလိုက်​..ရှုမှတ်​လိုက်​နဲ့ ၁၅မိနစ်​ခန့်​ကြာသည်​။ ထိုသို့ရှုမှတ်​​နေရင်း.တိမ်​​ပေါ်တွင်​ အစိမ်း​ရောင်​နဂါးကိုလှမ်းမြင်​ရသည်​။ ​သေချာစူးစိုက်​ကြည့်​မိလျှင်​ အစိမ်း​ရောင်​​တောက်​​နေ​သော..အမျိုးသမီး၊မျက်​စိမှာ ကြယ်​တာရာကိုညဘက်​ကြည့်​လျှင်​မြင်​ရသည့်​အတိုင်းဖြစ်​သည်​။ ၁၆နှစ်​အရွယ်​ခန့်​၊ ထိုအမျိူးသမီးက ကျွန်​​တော့်​ကိုသားတ​ယောက်​က်ုကြည့်​ရှူသလိုခံစားရမိသည်​။ (မှတ်​ချက်..​အဆက်​အသွယ်​အနည်းငယ်​ရှိ​သော်​လည်းကို့စိတ်​ကိုသိပ်​မယုံ​သေးပါ..အတိတ်​ဘဝကအ​မေမှန်းသိပါသည်​)
​မြေါက်​ဒဂူံသို့ရာက်​​သောအခါ.. Y.B.S​ရှေ့​ပေါက်​မှာလူတ​ယောက်​တတ်​လာသည်​။ အာရုံတွင်​ချက်​ချင်း ကြားဖိနပ်​စီးထား​သော ​ခြေ​ထောက်​တဖက်​မြင်​ရသည်​။ ထိုလူက ကျွန်​​တော့်​ကို တန်​ခိုးဖြင့်​ လှမ်း​ဆော်​လိုက်​သည်​။ ရုတ်​တရက်​​ခေါင်းမူး ရိပ်​ခနဲဖြစ်​သွားသည်​။ ဗုဒ္ဓမနုဿ တိ ကိုပွားမှ ​ခေါင်းမူးရိပ်​ခနဲဖြစ်​သွားတာရပ်​သည်​။ စိတ်​​တော့မဆိုးပါ။
ကျွန်​​တော်​က ကျွန်​​တော့်​အ​စောင့်​အ​ရှောက်​​တွေမြင်​ရ​စေဟု.အဓိဋ္ဌာန်​လိုက်​သည်​။ ​ခြေ​ထောင်​နစ်​ဖက်​​ပေါ်လာပြီး.​ခြေစုံရှိခိူးသည့်​ဟန်​ဖြစ်​သည်​။ထိုအချငိးအရာကိုမြင်​ရ​သောလည်းမာန်​မတတ်​ရဲ​ပေ၊.စက်​​တွေလွှတ်​မှဟုတ်​​ပေ့ဖြစ်​သွားဦးမည်​။ အရဟံဂုဏ်​​တော်​ကိုပွားလိုက်​ပြီစလျစ်​လျူရှူလိုက်​သည်​။ ထိုအချင်းအရာသည်​တမိနစ်​ပင်​မပြည့်​။ ဝုန်းဒိုင်း အ​ရှေ့​ပေါက်​မှတတ်​လာ​သောသူက​နောက်​​ပေါက်​ကို​ပြေးသွားပြီးချက်​ချင်းပင်".ဒါ..(.....)မှတ်​တိုင်​လား..Sorryကားဆရာ​ရေ..မှားတတ်​မိတာ.."ဟုဆိုပြီးဆင်းသွားသည်​။ မျက်​စ်ိမဖွင့်​ကြည့်​​သောလည်း.အသံကြားရသည်​။ ထို့လူကို​မေတ္တာပို့လိုက်​ပါသည်​။
ကျွန်​​တော်​ကသူဘာမြင်​လို့ဆင်း​ပြေးသွားတာလဲလှမ်းကြည့်​လိုက်​​သောအခါ...ဝယမပ​တောင်​စဉ်​ပညာမှ အ​စောင့်​သုံးပါးနှင့်​ ခုနက နဂါးမယ်​​တော်​ဟုယူဆရ​သောအမျိုးသမီးကို​တွေ့ရသည်​။ သူတို့ကိုလည်း​မေတ္တာပို့အမျှ​ဝေလိုက်​သည်​။
အက်​ဆိုင်းမန့်​တင်​၊ဘာလုပ်​ညာလုပ်​..ပြီးဆရာ့ဆီသွားသည်​။ ထိုသို့မသွားခင်​အဓိဋ္ဌာန်​ခဲ့သည်​။ ဆရာ့ဆီကို ကျွန်​​တော်​နဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်​ပါ​သောသူများသာ​ရောက်​ရှိပါ​စေ၊ ဓာတ်​စီး​စေလို့ဟူ၍သာအဓိဋ္ဌာန်​သည်​။ (ထိုစဉ်​ကမိမိမှာဓာတ်​စီးမည်​ဟူယူဆမိသည်​)
ဆရာ့ဆီသို့​ရောက်​​သောအခါ.ဆရာက​ရေချိုးမိုးချိုး​နေသည်​။ အခန့်​သားပင်​ဝင်​ထိုင်​လိုက်​သည်​။ ​ကောင်းကင်​တွင်​တည်​​နေ​သောနဂါးမယ်​​တော်​ကဝင်​မလာ​ပေ၊ အန္တရာယ်​​ပေးမည်​မဟုတ်​ပါ ဝင်​လာပါ​စေဟုဆု​တောင်းလိုက်​သည်​။ ကျွန်​​တော့်​​ဘေးတွင်​ရှိသလိုခံစားရသည်​။ဆရာကိုလမ်းမှာမြင်​ရတဲ့အဖြစ်​အပျက်​ကို​ပြောပြသည်​။ ညကမက်​သည့်​အိပ်​မက်​ကိုလည်းဆရာ့အား​ပြောပြသည်​။်​။ ထိုအချင်းအရာကိုသည်းခံလိုက်​သည်​။
ဆရာ့ဆီကိုလာတဲ့ဧသည်​ကအရမ်းများသည်​။ အဓိမဋ္ဌာန်​ဘဲ့သွားသည့်​​နေ့တွင်​ ဆရာနဲ့နည်းနည်းသာစကား​ပြောခွင့်​ရသည်​။အဓိဋ္ဌာန်​ရင်​များများ​ပြောခွင့်​ရ​သောလည်းသိပ်​အားမရ.​ပေ။
ဓာတ်​စီးသူအမသုံး​ယောက်​​ရောက်​​နေသည်​ကို​တွေ့ရသည်​။ သူတို့​ပြောစကားများအရ..တ​ယောက်​နဲ့တ​ယောက်​ဆရာ့ဆီမှာဆုံဖို့ခက်​သည်​ဟုဆိုသည်​၊​တေ့လွဲ​လေးများဖြစ်​ကြသည်​ဟူဆိုသည်​။ တခြားဆရာ့ဆီကိုလာ​မေးသည့်​ စုံတွဲနစ်​​ယောက်​ရှိ​သော်​လည်းသူများအ​ကြောင်းမို့မ​ဖော်​ပြ​တော့​ပေ။
ဘုရားခန်းတွင်​ အဲကွန်းလမု​ပျောက်​​နေသည်​မိူ့ ကျွန်​​တော့်​ဖုန်းနှင့်​ဖွင့်​​ပေးရန်​ ​ဘေလ်​မရှိ​ပေ။ အသားဖြူဖြူနှင့်​ဓာတ်​စီးသူအမထံမှ wifi သုံးကာဖွင့်​​ပေးလိုက်​ရ​သေးသည်​။ (ဒါက ​ရှောင်​မီဖုန်း​ကြေညာဝင်​တာပါ)
ဓာတ်​စီသူအမမှ ဓာတ်​စီးတာနုနယ်​သည့်​အမအား ဓာတ်​စီးရင်း လိုအပ်​သည်​များကို​ပြော​နေသည်​။ ကျွန်​​တော့်​တ​ယောက်​ထဲ နံ့သာနံ့လိုလို ​မွှေးအီတဲ့အနံ့လိုလိုရလာသည်​။ (မှတ်​ချက်​..ဆရာ့အိမ်​သို့​ရောက်​​သောအခါအကြားအမြင်​ကိုမသူံး​တော့​ပေ...)ဘာများလဲ​ပေါ့..၊တခြားသူများကိုသတိထားကြည့်​​သောအခါဘာမှမထူးခြား၊ ဆရာကသိပုံရသည်​။သိူ့​သော်​ဘာမှမ​ပြော။
ကျွန်​​တော့်​ခန္ဓာကိုယ်​ကို ဓာတ်​စီးချင်​သလိုဖြစ်​လာသည်​။ ကိူယ်​​စောင့်​နတ်​နဲ့ ဆရာ​တွေခွင့်​ပြုရင်​စီးပါ​စေဟုဆု​တောင်းလိုက်​သည်​။ ဓာတ်​စီးချင်​သလိုဖြစ်​​သော်​လည်းမစီး​ပေ။ (စီး​နေကျမဟူတ်​သည်​ကတ​ကြောင်း၊ ကိုယ်​၌က ဓာတ်​စီးသည်​ကိုမနှစ်​သက်​သည်​ကတ​ကြောင်း​ကြောင့်​​နေမယ်​)
သို့နှင့်​ ဓာတ်​စီးသူအမက တခြားဓာတ်​စီးသူနုနယ်​သည့်​အမအား​ပြောသည့်​စကားပြီးခါနီးတွင်​..ကျွန်​​တော်​မှ.စိတ်​အာရုံကိုစူးစိုက်​ကာ နဂါးမယ်​​တော်​ဓာတ်​စီးပါ​စေ..ဟုအဓိဋ္ဌာန်​လိုက်​သည်​။ ထိုဓာတ်​စီးသူအမထံတွင်​ ရုတ်​တရက်​ကျွန်​​တော့်​က်ိုလှမ်း​ခေါ်သည်​။ ကျွန်​​တော်​ကလည်း ဘုမသ်​ဘမသိနဲ့​ကြောင်​​နေစဉ်​...ဆရာက"သား..သွားလိုက်​ပါ"ဟုဆိုသည်​။
ကျွန်​​တော်​ကသွားသည်​။ စကား​တွေအများကြီး​ပြောသည်​။ မှတ်​မိသည်​ကား.".နဂါးမယ်​​တော်​ဖြစ်​တဲ့အ​မေ့ရဲ့သား​တော်​..ဟူတ်​လား....
အ​မေတိတိကျကျဆက်​သွယ်​လို့မရတာ.အ​ကြောင်းကိစ္စ​တွေအများကြီးရှိလို့ပါသားရယ်​..(ငိုသံပါ) ...သားအ​မေရှိတဲ့​နေရာကိုသိတယ်​ဟူတ်​လား..သားကြိုက်​တဲ့ဘုရားနားမှာဆု​တောင်း..​လောဘမပါ​စေနဲ့...သားအ​မေ့ဘက်​က်ိုလှည့်​"ဟုဆိုကာ..​လေနဲ့မှုတ်​..သည်​။ သုံးပတ်​ပတ်​သည့်​ပုံစံဖြစ်​သည့်​အခါ..ရင်​ထဲမှာလုံးဝစိူ့တတ်​လာပြီးအရမ်းငိုချင်​လာမိသည်​။ တင်းကျပ်​သလ်ိုခံစားရ​သောလည်းရင်​ထဲမှစို့တတ်​သည့်​ဒဏ်​ကပိုများသည်​။ ငို​တော့မငိုမိဘဲ့မျက်​ရည်​ဝဲသွားသည်​။. ​ရှေ့သုံးပါတ်​​နောက်​သူံးပတ်​ပတ်​ပြီး​နောက်​..ဘုရားကိုဦးချကာ..ထိုအမမှာပုံမှန်​ဖြစ်​လာသည်​။
ကျွန်​​တော်​က အိပ်​မက်​လိုဖြစ်​​နေ၍.."ဟုတ်​ပါ့မလား"ဟုဆို​သောအခါ ဆရာက. "ဟာ...မင်းကအာရုံထဲကဟာကိုမယုံ​တော့ အပြင်​မှာတကယ်​လက်​​တွေ့ပြတာ​တောင်​မယုံဘူးလား..တကယ့်​​ကောင်​ဘဲ့"ဟုဆိုသည်​။
စဉ်းစားမိသည်​က....ဘာမှမစဉ်းစား​တော့ခြင်းပင်​၊ တရားအားထုတ်​၍ သမထ​ပေါက်​တုန်းက သူံးဘဝထိပြန်​မြင်​​သောလည်း..ထိုနဂါးဘဝကိုမမြင်​၊အိပ်​မက်​ထဲမှာသာသိရသည်​။ ဘဝ​တွေကတို​တောင်းလှ​ချေသည်​။..ပဋ္ဌာန်းဆက်​​တွေလည်းအားကြီးလှ​ချေသည်​။
Writer Saw Myat Tun
myanmar esteem amazing life real
4 months ago by sawmyat (46)
အသိတစ်‌ခုတိုး‌စေလို့ ‌ကျေးဇူးပါညီ။ဆက်‌‌ရေး‌ပေးပါဦး။
တကယ်ကြီးလား😱 စာလုံးတေ သေးပြီး အတန်းလိုက်ဖြစ်နေတယ် ပိုစ့်တော့ စစ်ပါအူးလေ spaceမျာ့းပါ လျော့လိုက်ပါ😁
ကိုယ်မသိတဲ့ လောကပါလား ထူးဆန်းပါပေတယ်
သိပ်မသိသေးပါလား ဆက်အားပေးနေမယ်ဗျာ။ နယ်ပယ်အသစ်တစ်ခုပေါ့။
myanmarkoko (52) ·4months ago
သဘာဝလွန် ကိစ္စတွေအပေါ် သိပ်တော့ နားမလည်ဘူးဗျာ
Congratulations @sawmyat! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :
ကိုယ်နားမလည်သော နယ်ပယ်ကအကြောင်းမို့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ် ...